Fanontaniana sy valiny | Hevitra MPANOHARIANA
mikasika an'ilay volavolan-dalàna 23/2007 manome fahalalahana tanteraka ny orinasa handray mpiasa vahiny araka izay ilaina
io tena fokasy be io ra tsy voahitsy mialoha. Ny tokony ho izy ny cadre sup ihany no avela hanao an'izay ny orinasa fa ny ankoatr'izay tokony ho ny gasy no priorite. Izany hoe raha toa ka misy gasy manana competence hanao an'ilay asa dia tsy azo omena vahiny ilay asa.
Otr'izany doly ny ataon'ny firenena mandroso rehetra. Politika tsotra hanakelezana ny taux de chomage io. Fa raha avela ho gaboraraka eo, na ny planton aza mety hafaran'zala avy any ivelany tsssssssssssss
Ilay resaka SADC, COMESA, COI indray. Tsara ny manokatra ny tsena gasy @ firenana maro fa na izany aza beloatra ireo. Tokony misafidy. Ny COI aloha tena tsy azo hialana satria isika future puissance eto @ Ocean Indien. Question de tps fotsiny io, fa isika no tena hamatsy an'ireo nosy ireo, zany hoe position dominant isika.
Tsy maintsy ny 1 @ SADC sy ny COMESA izany no hialana. Raha ny tokony ho izy ny SADC no interessant kokoa. Ao ny ankamaroan'ny firenena miteny anglisy, sy ireo mba matanjaka eo @ Afrika. i COMESA tsara ihany fa mavesatra be ilay mandoa cotisation anaki-2 no koa tsy hita marina izay tena tombotsoa azon'ny gasy aminy, insignificative zany e. Otran'ny mort lente hafahafa izany le izy...
Nampidirin'i simp @ 23:05, 2007-09-23 [Valio]